पिसीआर पोजेटिभ आए नआत्तिने, अनावश्यक सुझावको पछि हैन नजिकैको अस्पताल जाने – Nepal Japan
पिसीआर पोजेटिभ आए नआत्तिने, अनावश्यक सुझावको पछि हैन नजिकैको अस्पताल जाने
एकजनालाई निको भएको औषधिले अर्को व्यक्तिलाई निको नहुन सक्छ
नेपाल जापान १७ बैशाख ११:२५
कोरोना भाइरस संक्रमणको नयाँ लहर सुरु भैसकेको छ । नयाँ प्रजातिको यो भाइसर अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै शक्तिशाली रहेकोले संक्रमण दर र मृत्युदर अत्यधिक बढेको छ । यसको रोकथाम र संक्रमण भैसकेपछिको उपचारमा पहिलेको जस्तो ढिलासुस्ती घातक हुने विज्ञहरुको ठहर छ ।
विगत एक वर्षदेखि कोरोना भाइरस, यसको विशेषता, जोखिम तथा रोकथाम र उपचारका विषयमा कलम चलाउँदै आउनुभएका जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले आफ्नो फेसबुकमा यसपटकको कोरोना महामारी अघिल्लो वर्षको जस्तो नभएकाले बढी सचेत हुन र केही लक्षण मात्र देखिए पनि तत्काल परीक्षण गरेर उपचारमा बस्न सुझाव दिनुभएको छ ।
यसै विषयमा डा. पाण्डे आम सर्वसाधारणको जानकारीका लागि क्रमबद्ध रुपमा दिंदै लेख्नुहुन्छ-
– पिसिआर पोजिटिभ आएमा गतसाल जस्तो सप्लिमेन्ट (भिटामिन वा इम्युन बुस्टर) खाएर ढुक्क नहुनुहोला । यसपटक छिटो कोभिड निमोनिया हुने भएकोले तुरुन्तै नजिकको कोभिड अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा जानुहोला । त्यहाँ चिकित्सकले तपाइंलाई परीक्षण गरेर आबश्यकता अनुसार छातीको एक्स रे, रगतको जांच तथा सिटि स्क्यान गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ । यदि तपाइंको अवस्था खराब छ भने उहाँहरुले औषधि वा भर्नाको लागि सल्लाह दिनुहुनेछ । उहाँहरुको सल्लाह अक्षरस पालना गर्नुहोला ।
– कुनै पनि चिकित्सकले औषधि चलाएको बेला पनि भित्रभित्रै असर हुनसक्छ । यो भाइरल संक्रमण भएको हुँदा एन्टिबायोटिकको भर पर्नु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा एकपटक छातीको एक्स रे वा सिटि स्क्यान गर्नु सुरक्षित हुन्छ ।
– उपचार पश्चात पिसिआर नेगेटिभ आए पनि कोभिडले तपाइंका बिभिन्न अंगमा असर गरेको हुनसक्छ । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार यसको पनि उपचार गरेर स्वास्थ्यलाभ गर्नुपर्ने हुन्छ ।